Lanonam-panokafana ny BKWELL JWELL DWELL Biraon'ny raharaham-bahiny any Thailandy - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Fotoana: 2019-07-09 Hits:
Nandray anjara tamin'ny fanokafana ireo sakaizan'ny fikambanana indostrialy any Shina sy Thailand Lanonana an'ny BKWELL JWELL DWELL Biraon'ny raharaham-bahiny.
Ireo mpitarika ny Fikambanan'ny Plastika China dia nilaza tamin'ny hafatra niarahaba fa i Jwell no filoha lefitry ny fikambanan'ny indostrian'ny milina plastika China ary mpitarika ny indostrian'ny milina fitrandrahana sinoa mandritra ny valo taona. Jwell dia mpanentana mavitrika ary mpitarika amin'ny piraofilina plastika, fantson-tsolika sy faritra misy milina. Miaraka amin'ny fampivoarana ny toekarena sinoa, dia manjary lasa mpanamboatra ny mpamorona isika. Antenaina fa ny fananganana ny biraon'ny Thailand dia hanome fanampiana sy fanampiana ho an'ny orinasa maro amin'ny indostrian'ny plastika sinoa any ivelany.
AndriamatoaHE Haichao, filohan'ny Jwell Company, dia nisaotra ireo vahiny, namana ary ireo rehetra nanatrika ny lanonam-panokafana ny birao. Mahatsapa ny hatsaram-panahy avy any Thailandy ny olona Jwell. Mampanantena izahay fa hiezaka mafy araka izay tratra mba hanompoana ny mpanjifantsika any Thailandy sy Azia atsimo atsinanana.
Nanomboka tamin'ny 2004, JWELL dia mivarotra visy sy extruders any Thailand. Amin'ny ho avy, ny Birao Thailand dia hanohy hanome lanja ireo mpanjifa manana vokatra tsara kokoa sy serivisy mety kokoa amin'ny alàlan'ny fanavaozana ara-teknolojia, serivisy ary fitantanana.
Amin'ity fampirantiana ny InterPlas Thailand ity tamin'ny taona 2019, nanana karazana extruder, crusher, milina fanamafisam-peo vaovao sns isika.
BKWELL dia nampiseho milina famolavolana mandeha ho azy ao amin'ny booth miaraka amin'ny haitao mandroso izay misy fampiharana betsaka amin'ny fonosana, kojakoja ilaina isan'andro, indostrialy ara-pahasalamana sy hafa.
Adiresy ： 址 ：
ที่ อยู่: 89/11, เอ็น เตอร์ ไพรส์ พาร์ ค, บบงงาา,, กรุงเทพ กรุงเทพ, เมือง ไทย.
[email voaaro];[email voaaro];[email voaaro]
Taona tsy fahita firy, Jwell dia nanangana birao any Thailand, Turkey, India, Vietnam, Bangladesh, Russia, Amerika Avaratra ary firenena hafa. Afaka manome ny serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay izahay.
HIVERINASHANGHAITEX 2019 MANarahaba An'i JWELL